Shinoa Tanora - Matahotra ny Ho ao amin'ny Fifandraisana Matotra Elaine Dai
Shinoa Tanora — Matahotra ny Ho ao amin’ny Fifandraisana Matotra Elaine Dai
«Izaho tsy mahita vehivavy sakaizany ireo online dating apps.»HI Vilany nilaza, izay iray taona programa ny Xiao Entona ao Shijiazhuang. Toy izany mampiaraka an-tserasera fampiharana ny HI efa voalaza, ahitana ny Tanta, Momo, etc, dia be nandray amin’ny Shinoa tanora, amin’ny fifadian-kanina mandroso finday teknika sy fifandraisana Aterineto. Na izany aza, ny fampiharana ireo, izay tany am-boalohany dia natao ho an’ny tokan-tena ny olona mba hahita ny tonga lafatra mpiara-miasa, izay efa tsikelikely ho lasa fitaovana ho an’ny olona izay mitady firaisana. Izany dia tsy fahita raha jerena ny fanerena ho an’ny mpitarika sambatra ny fiainana, ary ny vola ho an’ny fanambadiana dia hahamaro, izay raiki-tahotra ny tanora, indrindra fa amin’ny tier tanàna, mba hahita vehivavy sakaizany sy mikatsaka fa tsy milamina ny fifandraisana amin’ny aterineto mampiaraka apps. Fa tsy nahita»ny tena fitiavana»momba ny Tanta, HI niaiky izy izay ampiasainy izany rehefa mahatsiaro irery sy mankaleo.»Izany mampientam-po ary tsy mila miahiahy momba ny ho avy.»MIARAHABA ny asa manome azy ny faran’ny herinandro eny, ary izy dia mipetraka amin’ny ray aman-dreniny.
Ho azy, ho amin’ny fifandraisana matotra, toy ny filokana, dia midika hoe overloading output sy»iza no mahalala»hiverina.»Ankehitriny, ny vola lany amin’ny fanambadiana dia mihabetsaka, ary izany dia tena sarotra ho ahy ny manosika ho amin’ny asa, ary mikarakara ny olon-tiany tamin’izany fotoana izany. Aleoko mampiasa ny Tanta, ary hahita ny tenako iray andro mpiara-miasa.»Ho an’ny tanora toy HI, tena mafy olana ho azy ireo mba ho amin’ny fifandraisana matotra. Amin’ny tsy fantatra ny hoavy, ny fanambadiana mahomby dia mifototra amin’ny tsara ara-toekarena, ny toe-ny andaniny sy ny ankilany fa tsy tena ny fitiavana eo amin’ny mpivady ny mpivady. Noho izany, ny olona dia ho mora mora ampiasaina mampiaraka an-tserasera fampiharana izay no haingana sy tsotra, mba hahita vonjimaika fientanam-po sy fampaherezana. Koa mba ho tena mora ny mahita ny mpiara-miasa, Tanta mampiseho users’ ny sary, ny taona, ny asa, ary na dia tiany. Ireo mpampiasa dia afaka mandefa»tahaka»ny olona izay tiany, na mihevitra izy ireo fa mety tsara ho amin’ny fifandraisana.»Taorian’ny taona iray satria Tanta naorina, ny isan’ny mpampiasa tonga tapitrisa,»hoy Yu Wang, ny mpiara-TALE jeneralin’ny Tanta.
Io isa io dia tsy vitsy ny fahafantarana ny zava-nitranga ny HI
Maro Ny Shinoa tanora olom-pirenena dia mandalo fotoana sarotra ny mahazo manambady. Araka ny antontan’isa navoakan’ny Shinai namany sary, vehivavy ny fepetra ara-toekarena ho an’ny olona ihany koa niakatra ny vehivavy diniho, RMB no ambany indrindra ho an’ny lehilahy ny karama ary. ny vehivavy tokan-tena dia mitaky fa ny olona ny karama dia tsy maintsy tonga, RMB. Inona no kokoa, ny zava-misy fa ny fepetra takiana mba hanambady, fara fahakeliny, ahitana ny trano sy fiara, aoka ihany ny goavana vola ho an’ny fampakaram-bady tokana, dia ho maro ireo tokan-tena tompokovavy alaviro ny avy any na ho amin’ny fifandraisana matotra. Ao Shina, dia misy efa ho iray tapitrisa ny lehilahy ny vehivavy, araka ny tatitry ao Shina asa Fanompoana Sivily ny Raharaha. Maro dia maro ny tanora tokan-tena matahotra ny fitadiavana ny fiainana maharitra mpiara-miasa ary noho izany, ny eo ho eo ny taona hanambady dia manodidina. Ary rehefa mitady ny sipa sipa matetika no maka taona’ ela, izay mametraka lehibe ny fanerena eo ireo asa hanombohana.»Izaho vao nisaraka ny ankizivavy satria ny tena tsy rariny ny zava-misy sy fotsiny aho nihazakazaka Tanta mba hahita ny sasany sasatra ny fifandraisana.»Rehefa HI nampahatsiahy, ny antsoina hoe ny tena fitiavana dia mora fandravana eo anoloan’ny zava-misy. Noho izany, dia misy dia tsy mahagaga raha tapitrisa ireo olona mampiasa aterineto mampiaraka fampiharana ny mahita ny alina iray mijoro sy mandà ny manomboka ny fifandraisana. Ankoatra izany, ny fifadian-kanina-dalam-pandrosoana ny firenena ihany koa ny antony mahatonga izany toe-javatra mety hitranga. Amin’ny fampianarana ambony sy avo monina ny fitsipika, ny fiainana nanenjika ny olona, dia niova ihany koa. Ny fikatsahana ny ara-nofo no nilanja kokoa noho ny fikatsahana ny fitiavana, indrindra fa ho an’ny olona izay mipetraka any amin’ny tanàna lehibe. Shinai Website nanambara fa Shenzhen, any Beijing, Shanghai, Wuhan, ary Guangzhou dia an-tampon-tanàna izay vehivavy ny fepetra takiana ho an’ny olombelona no ambony indrindra.»Ny ankizivavy ao Beijing dia misokatra kokoa ny saina manoloana izany karazana fifandraisana sy ny maro hafa straight-forward.»HI koa. Mafy fampandrosoana dia midika ihany koa vidim-piainana, ny ambony fepetra sy dingana sarotra kokoa ho an’ny olona ny hahita ny sahaza iray.»Fony aho tany Beijing, tsy manana fotoana mba manahy momba ny fanambadiana aho manahy momba ny mampifangaro ho any Beijing.»Bebe kokoa ny tsindry mavesatra ao an-damosiny, ny fangatahana ho an’ny aina sy ny fampiononana aelin’ny azy ireo hampiasa Tanta. Tsara toy izany, Tanta ihany koa ny loza ho an’ny mpampiasa indrindra fa ho an’ny tovovavy. Mbola misy maro ny hosoka ny asa sy ny hosoka maha-izy eo amin’ny fampiharana, izay loatra ny antony HI tsy mahita lehibe sipa amin’ny Tanta.»Indray mandeha aho dia nihaona tamin’ny tovovavy iray izay manana sary tena tsy mitovy amin’ny azy.»HI nilaza. Ny toetry ny Aterineto tany am-boalohany virtoaly, ary tsy fantatra. Noho izany, dia ilaina ho an’ny tanora ny mangataka ho an’ny antsipirihany bebe kokoa momba ny vahiny sy ny hianatra ny fomba miaro ny tenany raha ny fivoriana ny mpiara-miombon’antoka ireo online dating apps. Raha fintinina, ny fanaovana antsojay endrikendriky ny fiarahana sy ny fanambadiana ao Shina azo avy nohalefahany tato ho ato ireo an-tserasera niaraka apps. Fa tsy ho feno fanoloran-tena ho olon-kafa nandritra ny taona maro foana, ny olona te hanao ny iray alina ny olona samy hafa. Na izany aza, misy ny tsy fahombiazana ny fanambadiana raha tsy misy ny ezaka sy ny fandraisana anjara, dia toy izany no tsy ho very ao amin’io vonjimaika ny fialam-boly raha tsy miraharaha ny fiainana maharitra orinasa
← Shinoa Ny Vehivavy Tokan-Tena Online Tena Sinoa
Tsara Indrindra Maimaim-Poana Webcam Toerana Maimaim - Poana Amin'ny Chat Roulette →